Leadership Strategy And Tactics- नेपालीमा सारांश - LweoNepal
Posted on: September 18, 2020 Last updated on: October 6, 2020 Comments:0Categorized in: अर्थशास्त्र, खुशी र आत्म-सुधार, विचारशीलता Written by: Admin
Summary of the book in Nepali /”Leadership Strategy And Tactics” पुस्तकको नेपालीमा सारांश
सारांश: नेतृत्वको रणनीति र कार्यनीति
Leadership Strategy And Tactics पुस्तकले, Jocko Willinkले पार्दर्शयता, नम्रता र अन्य यस्तै तरिकाको उपयोग गरि कसरि आफ्नो जलसेना Teamको सफल नेतृत्व गरे भनेर सिकाउदै, तपाईंलाई पनि एक सफल र प्रभावशारी नेतृत्वको कला सिकाउछ।
त्यसोभए एक लिडर/अधिनायक कसरी महान् बन्न सक्छ, यदि उसँग नेतृत्व गर्नका लागि आवश्यक प्राकृतिक गुणहरू छैनन्? उत्तर सरल छ: राम्रो अधिनायकले एक उत्कृष्ट टोली बनाउँदछ जसले उसको कमजोरीहरूलाई प्रतिरोध गर्न सक्छ।
यदि तपाईंले कहिलै कुनै टोलीको नेतृत्व गर्नुभएको छ भने तपाईलाई थाहा छ कि यो कत्ति गाह्रो हुन्छ। तपाईंले आफ्नो जिम्मेवारीहरू राम्रोसँग प्रबन्ध गर्न सक्नुपर्छ- प्रशिक्षण र निर्णयहरू आदि। र यो सबै चिजहरु भन्दा माथि, तपाईंले आफ्नो टीम को लागी एक राम्रो उदाहरण सेट गर्न पारदर्शी नेतृत्व गर्न आवश्यक छ!
यो जति सुकै गाह्रो रहेपनि, सहकार्य नेतृत्व जीवन वा मृत्यु जस्तो परिस्थितिमा भने एक टीमलाई manage र control गर्न कहिल्यै कठिन हुदैन। हामि कृतज्ञ हुनुपर्छ, जलसेना SEAL platoonको प्रमुख Jocko Willinkले गरेका कार्यमा। आफ्ना अनुभव र सिकेको कुरा अफिसमा कत्ति राम्ररी लागू हुन्छ भनेर बुझेपछि उनले लेख्न सुरु गरे।
नतिजा उनको पछिल्लो पुस्तक, Leadership Strategy And Tactics हो। यस पुस्तकले कल्पित हल्लालाई टुक्रा टुक्रा पार्छ किः सैन्य इकाईहरूले आँखा बन्द गरेर आदेशहरूको पालना गर्छन्। तपाईले देख्नुहुनेछ कि यी अवस्थाहरूमा प्रभारीहरूले विश्वासका साथ सम्बन्ध निर्माण गर्न नम्रतादेखि लाएर सबै प्रकारका सीपहरू चाहिन्छ।
यहाँ मेरो मनपर्ने पाठहरू मध्ये ३ पाठहरू छन्, जुन् यस पुस्तकले नेतृत्वको बारेमा सिकाउँदछ:
टीमको नेतृत्व गर्दा उत्तम चाल चल्नको लागि, एक कदम पछाडि लिनुहोस्, चाहे (Literally)शाब्दिक रूपमानै पछाडि सर्नुपरे नि।
प्रभावकारी नेतृत्वको अर्थ आइपरे वेश्यासँग पनि मद्दत माग्न लज्जीत humilated नहुनु हो।
यदि तपाईं सबै चीजहरू अधिक सुचारु रूपमा चलाउन चाहनुहुन्छ भने, राम्रोसँग कुराकानी communicate गर्न सिक्नुहोस्।
पाठ १ः टीमको नेतृत्व गर्दा उत्तम चाल चल्नको लागि, एक कदम पछाडि लिनुहोस्, चाहे (Literally)शाब्दिक रूपमानै पछाडि सर्नुपरे नि।
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं एक नेभि(जलसेना) टीमको साथ प्रशिक्षण मिशन गर्दै हुनुहुन्छ। टोली एउटा स्थितिमा फस्यो, कसरी अगाडि बढ्ने थाहा छैन, सम्पर्कको लागि प्रतिक्षा गर्दै। तर कोसैले पनि केहि
फैसला लिन सकेनन्, किनकि त्यहाँ धेरै अज्ञात वातावरण थियो।
तपाईंको प्रशिक्षणमा तपाईंले Targetहरु Scan गर्नु थियो, तर त्यहाँ तपाईको बन्दूकको Scope मार्फत तपाईले धेरै View दौख्न सक्नुभएन। कोहीले पनि राम्रो सँग केहि देख्न सकेनन्। जबस्म कोही व्यक्तिले अझ राम्रो दृश्य पाउनको लागि आफू Groupबाट अलग गर्ने निर्णय गर्दैन, उनिहरुको Team सफल हुने छैनन्।
यस परिस्थितिमा Willinkले पनि आफु अलगिने निर्णय लिगे, र अलगिने क्रममा उनि सहि दिशामा बन्दुकमा सार्न पुगे, र उनले वरपर के हुँदैछ भनेर राम्ररी बुझे। यो प्रकारको चाल यस्तो चीज हो, जुन उनले लडाई परिदृश्यहरूमा नभए पनि प्रभावकारी पाउँदछन्।
यदि तपाईको प्लेटमा तपाईले पाउनु भएको सामान धेरै छ भने महसुस (धेरै काम गर्न लगिईएको) गरिरहनु भएको छ भने, केहि समयको लागी तपाई आफु बस्नु भएको स्थानबाट अलिक पर जानुहोस्। तपाई शाब्दिक Literally रूपमानै आफ्नो डेस्क वा कुनै पनि भौतिक स्थानबाट पछाडि सर्न सक्नुहुन्छ ; जुन कुनै परिस्थिति चलिरहेको भएपनि। अब, एक लामो सास लिनुहोस्, आराम गर्नुहोस्, र पुनर्मूल्यांकन गर्नुहोस्।
यसो गर्नाले यति राम्रोसँग काम गर्दछ कि, तपाईले लिनु भएको Pauseविरामले तपाईंलाई कुनै पनि निर्मित भावनाहरू छोड्न दिन्छ जसले तपाईंको निर्णयलाई ब्लक गर्दैथियो। तपाईं केवल तब मात्र राम्रो निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईंसँग कडा भावनाहरू आउँदैनन्। र यसो गर्नको एक चोटि सास लिनु(Pause लिनु) उत्तम हो।
पाठ २: वेश्यालाई उठाउनु केवल एक चीज हो जुन राम्रो, नम्र, इमान्दार नेताले गर्छ।
केही व्यक्तिहरु अझै पनि गलत विश्वास गर्छन् कि मानिसहरू प्रतिभाको साथ वा कमीको साथ जन्मेका हुन्छन्। यो असत्य मात्र होईन तर व्यक्तिगत बृद्धिलाई हानिकारक पनि छ। किनभने कडा मेहनत पछाडि प्रतिभा अवस्थित छैन भनेर तपाइँले स्वीकार गर्न सक्नुभयो भने सबैले जेपनि सुधार गर्न सक्दछ बनेर तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
यो मानसिकता एक प्रभावकारी नेता हुन को लागी एक महत्वपूर्ण कुञ्जी, पनि हो। जब तपाई कुनै परिस्थितिमा राखिन्छ, तपाईलाई भारी imposter syndrome लाग्न सक्छ, वा तपाई यसका लागि राम्रो हुनुहुन्न भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ। त्यो परिस्थितिमा आफुलाई देखदा तपाईंले आफुले आफैलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अव्यावहारताको अप्ठ्यारोपनको भावनाहरूलाई मेटाउन सक्नुहुन्छ।
तेसै गरि यसो गर्नाले, तपाईंको सीप Timeको Movementको साथमा अभव भैरहेको जस्तो महसुस हुँदा नम्र रहने/देखिने राम्रो तरिका हो। व्यक्तिहरुले निरन्तर अहंकारी नेता भन्दा राम्रो हुने कोशिस गर्ने खालको नेतालाई रुचाउँदछन्।
तपाईं वेश्या उठाउने जस्ता कार्यहरू गर्न पनि नम्र हुनु आवश्यक छ। यो वाक्यांशले, लक्षित अभ्यास पछि बुलेट शेलहरू उठाउन खर्च गरेको समयलाई जनाउँछ, जुन प्रायः निम्न स्तरको जिम्मेवारी मानिन्छ। तपाईंले एक नेताको रूप गर्ने यो भन्दा माथिको काम कुनै हुन्न, र तपाईंले यो याद गर्नु आवश्यक छ।
यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले यी कामहरू गर्नका लागि स्वयम्सेवा गर्नु हो। तर जब तपाईं उनीहरूलाई मद्दत गर्नुहुन्छ यसले तपाईंको टीमको बीचको एकतामा सुधार ल्याउँछ। यसो गर्नाले सम्मान र विश्वास जित्न पाउने एक उत्तम तरिका हो।
पाठ३: टीमसँगको स्पष्ट कुराकानीले सबै थोरै राम्रो हुन्छ।
आफुले नेतृत्व लिदा वा आफु जिम्मेवार हुदा उत्कृष्ट प्रश्तुति दिनका लागी, तिमलाई जानकारी कसरी प्रभावकारी तरीकाले दिन सकिन्छ भनेर सिक्नुहोस्। यदि तपाईं यसो गर्नुहुन्न भने, मानिसहरू अलमल्लमा पर्छन्, गल्ती गर्न थाल्छन्, पछाडि छोडिन्छन्, र मनोबललाई क्षति पुर्‍याउने हल्लाहरू सुरू गर्न थाल्छन्।
यो सीपको अभ्यास गर्नाले तपाई ग्यारेन्टीको साथ ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईका व्यक्तिले तपाईलाई भरोसा गर्दछन् र तपाईहरुले गर्ने सबै कामअधिक कुशलतापूर्वक सफल हुन्छन्।
र, जब तापाईले कसैलाई प्रशंसा गर्नुहुन्छ, तपाईले विशिष्ट Specific र सम्बन्धित शब्दको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । उदाहरण को लागी, “तपाईको आत्मविश्वासलेनै हामीले पछिल्लो हप्ता गरेको बिक्री सफलताको लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको थियो!” भन्नु “तपाईंले राम्रो गर्नुभयो!” मात्रै भन्नु भन्दा धेरै राम्रो हो!
तपाईले गर्नु भएको प्रशंसाको ठूलो तस्वीर बनाईदिनु एक राम्रो विचार हो। प्रत्येक व्यक्तिलाई उनिहरुले हासिल गरेको सानो जित, समग्र लक्ष्यको बाटोमा प्रत्येक जीत महत्त्वपूर्ण चरण हो भनेर बिश्वास दिलाउनु टिमको लागि महत्वपुर्ण चिज हो।
त्यसैगरी, तपाईंले विशेष रूपमा अवलोकन गर्नुपर्छ कि, तपाईले कुनै पनि प्रकारको जानकारी दिंदा कोहि पनि पछाडि नपरुन्।
के हुँदैछ भनेर थाहा नभएका व्यक्तिहरू, अफवाको महामारीको लागि उत्तम प्रजनन मैदान हुन्। यसले टोलीको भावनालाई मार्नेछ र एकतालाई च्यात्नेछ। सबैको आ-आफ्नो उत्तरदायित्व बुझ्दैछ भन्ने कुरामा सुनिश्चित भएर यो अवस्थालाई जित्नुहोस्। र उनीहरूले तपाइँका आदेशहरू किन पालना गर्नुपर्छ भनेर कुरा उनिहरुलाई बुझएर, आफु एक इमानदार र उत्कृष्ट लिडर साबित हुनुहोस्।
थप, कहिले व्यक्ति अनाज्ञाकारी हुन्छन् भनेर आफु तयार हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईले कसरी बोल्नु हुन्छ भन्ने कुरामा सावधानीपूर्वक ध्यान दिनु पर्छ। मानिसहरू शान्त र आत्मसंयम व्यक्तिलाई सुन्छन् र Follow गर्छन्।
Tagged as: leader ship nepali leadership book summary summary of book in nepali सुममारय ोउ बोोक िन नेपालि
Previous Post Chernobyl-एक अैतिहासिक आणविक प्रकोप(Nuclear Disaster)/Summary of book in Nepali
Next Post Rich Dad Poor Dad- नेपालीमा सारांश-summary of books in nepali